Saturnino Calleja, akụkọ ya na ndị ọzọ | Akwụkwọ akụkọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme, Akwụkwọ ndị ntorobịa
Foto mkpuchi: akụkọ sitere na Calleja nke nna m na nwanne nne m.
Saturnino akpọ oku Ọ bụ otu n'ime ọnụ ọgụgụ ndị ahụ a maara nke ọma dị ka ihe na-adịghị mma site n'oge. Onye edemede, onye nchịkọta akụkọ na onye nkụzi, nnukwu akwụkwọ ụmụaka ya mere ka okwu a ma ama. "Nwee akụkọ karịa Calleja", nke nwere ike ịlarị efu n'ihi amaghị ama. Nke a bụ a nyocha na ndụ ya na ọrụ ya.
1 Saturnino akpọ oku
2 Akụkọ ifo
Saturnino akpọ oku
Saturnino akpọ oku A mụrụ Fernández na Burgos na 1853 ma bụrụ a Ntughari dị mkpa na akwụkwọ ụmụaka na ndị ntorobịa, nkuzi na ogugu akwukwo n'oge ya.
En 1876 Fernando Calleja Santos, nna ya, na-emepe ụlọ ahịa akwụkwọ na azụmahịa nke ga-abụ Editorial Calleja n'oge na-adịghị anya, nke gbanwere ebe obibi akwụkwọ. Na ya karịa Afọ 80 nke akụkọ ihe mere eme, bipụtara puku kwuru puku aha site n'aka ndị edemede Spanish na ndị mba ọzọ maka ụmụaka na ndị okenye.
Saturnino akpọ oku mekwara ma duzie magazin ahụ Ihe atụ nke Spain na National Association of Spanish Teachers na hazie Nzukọ Ndị Nkụzi Mba.
Ọ bụ ruo mgbe 1884 mgbe ọ malitere ibipụta akụkọ nke ahụ ga-eme ka ọ bụrụ onye a ma ama. Tupu o lekwasịrị anya Akwụkwọ ụlọ akwụkwọ dị ka usoro ọgụgụ, geometry, ọdịdị ala ma ọ bụ akụkọ sitere na Spain, catechisms, akwụkwọ nkà ihe ọmụma, akwụkwọ ntuziaka nke civility, iconographic mkpụrụedemede akwụkwọ, mere na echiche nke nkuzi fọrọ nke nta ka igwu egwu ma ọ bụ, ọ dịghị ihe ọzọ, na-ekpori ndụ.
Akụkọ ndị ahụ bụ ndọtị nke echiche ahụ. O bipụtara ọtụtụ na nchịkọta dị iche iche dịka Nchịkọta akụkọ ọhụrụ (akụkọ ifo, ọmarịcha ...), Ọbá akwụkwọ ntụrụndụ, Ọbá akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ntụrụndụ, ọba akwụkwọ eserese maka ụmụaka, ọbá akwụkwọ Perla. Akụkọ nke ụdị niile pụtara na ha, gụnyere ndị edemede dịka Salgari, Poe, Collodi ma ọ bụ akụkọ nke Akwụkwọ Nsọ.
Ọchịchọ ịmata ihe bụ akụkụ nke akụkọ ọ bụla, nke bụkwa ihe ọhụrụ, ebe ọ bụ na ha dị pere mpe enwere ike ịnakọta ha dị ka akwụkwọ mmado, na mgbakwunye na idobe ma ọ bụ iburu ebe ọ bụla. Nke ọ bụla dị ihe dị ka sentimita 5 n'obosara na sentimita asaa n'ịdị elu.
Ihe mgbakwunye ahụ bụkwa nke ahụ ndị na-ese ihe bara uru dị ka ole na ole ma ọ laghị azụ inwe ndị na-ese ihe a kacha mara amara n'oge ahụ, ndị ọrụ ha na-akpachapụ anya. Mgbe ọ nwụsịrị, onye nkwusa nwere aha dị ka Penagos ma ọ bụ Tono.
Ọzọkwa, akụkọ ndị odee emegharịrị dị ka Hans Christian Andersen ma ọ bụ ụmụnna Grimm ma tinye aka omenala na ndị ahụ omume ikpeazụ otú ahụ nke a na-akatọkwa ya ma zaghachi ya. Omuma akpaokwu dị ka «na Ha nwere obi ụtọ mgbe ọ bụlaHa enyeghị m ọzọ n'ihi na ha achọghị."
Ọ bụlas nke utu aha na-enweghị atụ bụ: Nne nnochi anya, Njem nke Thumbelina, Venturita, Onye na-ere ahịa nke Venice, Paco I the napias, The silkworms, The gold ounce, The miller's Ada, From urchin to senator, Giant, ọdụm na nkịta ọhịa ma ọ bụ agwaetiti Jauja .
Calleja bụ onye mbụ malitere nnukwu mbipụta mgbasa, na-enweta ọnụ ala dị ala yana ọnụ ahịa maka mmefu ego niile.
Na 1899 o bipụtara karịa 3 nde mpịakọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aha 900 nke isiokwu dị iche iche, ọ bụghị naanị akụkọ, nke na-erughị ọkara. Ọ bipụtara ọrụ okpukperechi, akwụkwọ ọkọwa okwu na akwụkwọ ndị okenye, dị ka akwụkwọ ahụike ama ama nke ukwuu n'oge ahụ. Na n'oge 60% nke ndị bi na-amaghị akwụkwọ, mmasị ya maka akwụkwọ na nkuzi mere ka ọ chọọ ịgbasa omenala malite na ụlọ akwụkwọ. Nke a dezie akwụkwọ ọgụgụ na pedagogical maka ndị nkuzi na ọbụna nyere n'ụlọ akwụkwọ ndị obodo na obere ego ego.
O mekwara ihe mbụ mbipụta Platero na mu (Juan Ramón Jiménez rụrụ ọrụ na ụlọ obibi akwụkwọ) ma bipụta ọtụtụ n'ime QuijoteỤfọdụ n'ime ha na-achọ ịmata ihe, dị ka nke nwere akwụkwọ pink ma ọ bụ ihe ọzọ a na-ahụ anya.
Na imecha, Ọ bụ ọsụ ụzọ n'ịkwalite na ịgbasa akwụkwọ ya. O nwere ndị nnọchi anya iri na asatọ n'etiti America na Philippines, ma bụrụkwa otu n'ime ndị mbụ na gụnyere echiche na katalọgụ banyere akwụkwọ ya, ihe na-ewu ewu taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akụkọ ihe mere eme » Saturnino Calleja, akụkọ ya na ndị ọzọ